Arbily X-Buds နားကြပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Androidsis
Arbily X-Buds နားကြပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သင့်အားကောင်းမွန်သောအသံပြန်လည်သုံးသပ်မှုကိုတင်ပြပါမည်။ ကျနော်တို့ကြိုးစား, တစ်ဖန်ပျော်မွေ့ခဲ့သည် Arbily လက်မှတ်နားကြပ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်၏အလှည့်ဖြစ်ခဲ့သည် ၎င်း၏အသစ်သောမော်ဒယ်များတ ဦးအဆိုပါ Arbily X-Buds။ အသုံးပြုသူများကိုကြီးမားသောကဏ္ others ကိုကျေနပ်အောင်ပြုလုပ်ပေးမည့်မော်ဒယ်လ်သည်အခြားသူများအတွက်အရေးမပါသည့်အသေးစိတ်အတွက်
အသံနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိရိယာများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည် X-Buds မှ Arbily ထံမှလည်းစမ်းသပ်နိုင်ခဲ့သည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်စမ်းသပ်ပြီးသည်နှင့်၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဝစိတ်ပျက်စရာမရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်သည်။ ပြီးတော့သူတို့ကမ်းလှမ်းတယ် သူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ထက်ပိုမိုစေသည်အရည်အသွေး / စျေးနှုန်းအချိုးအစား.
1 Arbily X-Buds နောက်ဆုံးတော့မင်းလိုချင်တဲ့နားကြပ်
3 ဤရွေ့ကား Arbily X-Buds ဖြစ်ကြသည်
4 "ထိပ်တန်း" နည်းပညာနှင့်အသံလျှော့စျေးစျေးနှုန်း
5 Arbily X-Buds နားကြပ်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ဇယား
Arbily X-Buds နောက်ဆုံးတော့မင်းလိုချင်တဲ့နားကြပ်
ပုံစံ X-Buds ၏တကယ်ကိုဖြစ်ပါတယ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်၎င်း၏အရေးအပါဆုံးအချက်များထဲကတစ်ခု။ သူတို့ကတစ် ဦး ကိုပူဇော်ယူဆ ကိုက်ညီတဲ့အသံ ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီကနေမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်အဘယျသို့၏။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမလေ့လာဘဲအသေးစိတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရမည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ခလုတ် format နဲ့ကြိုးမဲ့ TWS နားကြပ် သို့မဟုတ်နားကြပ်။ သူတို့သည်သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာလော။ ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။ တစ် ဦး လျှော့စျေးမှာအမေဇုံပေါ်မှာ။
သင်နှင့်အတူအဆင်ပြေမခံစားရဘူးသောသူတို့ထဲကတစ် ဦး ဖြစ်လျှင် နားကြပ်In-ear လို့လူသိများတဲ့ \_ t Arbily X-Buds သည်သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာသာဖြစ်သည်။ စျေးကွက်သည်ကြိုးမဲ့နားကြပ်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ရွေးချယ်စရာများစွာရှိပါသည် ဒီဇိုင်း၊ အရောင်၊ ပုံစံနှင့်အင်္ဂါရပ်များအရဖြစ်သည်။ သို့သော်အများစုမှာနားကြပ်ပုံစံရှိသည်.
ဤအမျိုးအစားကိုနှစ်သက်သောအသုံးပြုသူများစွာရှိသည် နားနားအထိမဝေးတဲ့နားကြပ်။ ထိုအလူသိများနှင့်နှိုင်းယှဉ် Apple AirPods အပြင်။ တကယ်ပဲ အနည်းငယ်ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ် ဒါကပိုက်ဆံအတွက်ကောင်းတဲ့တန်ဖိုးပေးနိုင်တယ်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲ ၏အဆုံးမဲ့စာရင်း Clone နှင့်အထက်ပါ Apple နားကြပ်ကိုတုပ
ဤသေးငယ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် Arbily X-Buds သည်စျေးကွက်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့ AirPods နဲ့တကယ့်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိတယ် အခြားမော်ဒယ်များနှင့်လည်းယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။ သို့သော်များစွာသောလူများအတွက်ပိုမိုအဆင်ပြေသောပုံစံကိုကမ်းလှမ်းသည်။ အကယ်လို့သင်ဟာဒီနားကြပ်ကိုမျှော်လင့်တဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ဆိုရင်၊ ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။.
လျှော့စျေးကုဒ်ကိုသုံးပါ NWANNEYF နှင့်အပိုလျှော့စျေးရ။
အဆိုပါ Canon များပေးပို့အဖြစ်, ငါတို့လုပ်ဖို့အချိန်ပါပဲ သေးငယ်တဲ့စာရင်း Arbily X-Buds အကွက်ထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သောအရာအကြောင်း။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း အံ့သြစရာမရှိပါ။ ကြှနျုပျတို့မှာ ... ရှိသညျ သူတို့ရဲ့ box ထဲမှာတင်ဆက်ဖြစ်ကြောင်းနားကြပ်သူတို့ကိုယ်သူတို့ အားသွင်းကြိုး ငါတို့သည်လည်းတစ် ဦး ရှာပါ အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်အသေးစား အခြေခံညွှန်ကြားချက်နှင့်အတူ။ ပြီးနောက် ချိတ်ဆက်ရန်ကေဘယ် ပုံစံနှင့်အတူ charger ကိုမှ box ကို USB အမျိုးအစား C.
ကျနော်တို့မှတ်ချက်ပေးရန်ရပ်တန့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး ဝါယာကြိုး ငါတို့တွေ့ခဲ့တာက အလွန်တိုသော။ X-Buds ကိုကွန်ပျူတာနဲ့ကပ်ထားဖို့လိုတယ်။ အကယ်၍ ၎င်းကို wall power connector တစ်ခုဖြင့်အားသွင်းရန်ရည်ရွယ်ပါက headphone box သည်နံရံနှင့်ချိတ်နေလိမ့်မည်။ အနာဂတ်ဖြန့်ချိမှုများတွင်တိုးတက်ရန်သံသယမရှိဘဲအလွန်အရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ။
ဤရွေ့ကား Arbily X-Buds ဖြစ်ကြသည်
Arbily X-Bud ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ကို အခြေခံ၍ စိတ်ဝင်စားစရာအချက်များစွာကိုတွေ့ရသည်။ The ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်ဆွဲဆောင်မှုခံစားရ မျက်မှောက်၌။ အဆုံးသတ် အဖြူရောင်တောက်ပသောအရောင် သူတို့ကိုမျက်စိ - ဖမ်းပါစေ။ နားအတွင်း၌ကျန်ရှိနေသောအပိုင်းကို AirPods ၏အပိုင်းတွင်တွေ့ရှိရသည်။ ဒါပေမယ့်အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့အရာကဘာနဲ့မှမတူသလိုကျွန်ုပ်တို့လည်းအဲဒီလိုပဲ။
အပြင်မှာ ငါတို့တစ်ခုတွေ့တယ် ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှုတည်ရှိရာဘယ်မှာ rounded ပုံသဏ္.ာန်။ တေးဂီတပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထိန်းချုပ်ရန်စီစဉ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ နားကြပ်တစ်ခုစီတွင်တစ်လုံးစီရှိသည် မြို့ပတ်ရထား LED အလင်း ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်သွယ်မှုသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်ဘက်ထရီအားသွင်းနှုန်းကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ရုံအောက်တွင်, ပြင်ပပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် မိုက်ခရိုဖုန်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားစမြည်ပြောဆိုမှုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေမည့်တည်နေရာ။
လေးထောင့်ကွက် o holster / charger ကို အဆိုပါ Arbily X-Buds ၏တစ် ဦး တွေ့ရမယ် နားကြပ်နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ တူညီသောပစ္စည်းများနှင့်ပြုလုပ်ထားပါကကနှင့်အတူဖွင့်လှစ် ၎င်း၏မျက်နှာပြင်အပေါငျးတို့သအာကာသသိမ်းပိုက်ကြောင်းအဖုံး လုံးဝ။ သူမ၏၌ နားကြပ်များသည်ရှေ့ကနေအနားယူသည် သူတို့ရဲ့ဝန်များအတွက်perfectlyုံသူတို့ကိုညှိသောသံလိုက်အပေါ်။ ၎င်း၏၌တည်၏ နောက်ဘက် ငါတို့တွေ့ပြီ connector ကို ပုံစံနှင့်အတူဤကိစ္စတွင်အတွက်ဝန် USB အမျိုးအစား C.
မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? ဤရွေ့ကားသင်ရှာနေခဲ့ကြသည်ကြိုးမဲ့နားကြပ်ဖြစ်လျှင် ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။ အမေဇုံအပေါ်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းမှာ။ Y code ကိုသုံးပါ NWANNEYF အပိုလျှော့စျေးရရန်.
Arbily သည်ပုံမှန်အားဖြင့်မည်သည့်ကုမ္ပဏီနှင့်မဆိုယှဉ်ပြိုင်ရန်အတွက် ၄ င်း၏နားကြပ်ကိုနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများတပ်ဆင်ထားသည်။ အဆိုပါ Arbily X-Buds သူတို့သည်မနည်း၊ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားသည် ဒါကြောင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအရှိဆုံးယုံကြည်စိတ်ချဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့၏ ၁၃ မီလီမီတာစပီကာ တစ် ဦး အဆင့်ကိုဆက်ကပ် မျှော်မှန်းထားသည်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ အ အသံက ငါတို့ဆီရောက်ပြီ စင်ကြယ်သောနှင့်တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံအပြည့်အဝ။ အဆိုပါ သင်္ချိုင်း ငါတို့မျှော်လင့်ထားသလိုပဲ အတိမ်အနက်နှင့်အစွမ်းနှင့်အတူ။ နှင့်အနည်းငယ်နှင့်အတူအသံအရည်အသွေး ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့, သန့်ရှင်းမြင့်မား။ သံသယမရှိဘဲ, အားလုံးမဟုတ်ကုမ္ပဏီများအောင်မြင်နိုင်စွမ်းဖြစ်ကြောင်းအသံ။
Arbily X-Buds တစ် ဦး ပါရှိပါတယ် မျိုးဆက်သစ်ချစ်ပ် ပူဇော်သက္ကာကို Bluetooth 5.0 ချိတ်ဆက်မှု။ ကျွန်ုပ်တို့ကအာမခံထားသည် ပိုမိုတည်ငြိမ်သော signal ကိုဆက်သွယ်မှုဆက်သွယ်မှုအကွာအဝေးနှင့်အသံထုတ်လွှင့်မှုလျော့နည်းခြင်း ၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များ၏အများစုကျော်တစ် ဦး ကသိသိသာသာတိုးတက်မှု။ The ဆက်သွယ်မှုအလိုအလျှောက်နှင့်အစာရှောင်သည်. ကျနော်တို့ရုံ box ကိုဖွင့်ရန်ရှိသည် နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နားကြပ် သူတို့ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ device ကိုချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် Arbily X-Buds များလည်းရှိသည် ၎င်း၏အားကြီးသောအချက်များတစ်ခု. သူတို့အပြည့်အဝတရားစွဲဆို မပြတ်မတောက်အသုံးပြုမှု4နာရီအထိ. ယင်း၏ charger ကိုအမှုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါတို့ပျော်မွေ့နိုင်တယ် စစ်ဆင်ရေးအထိ 20 နာရီ သူတို့ကိုထည့်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ငါတို့လုပ်နိုင်တယ် ငါးအပြည့်အဝစွဲချက်အထိ ဒါကြောင့်တစ်နေ့လုံးမရပ်မနားတေးဂီတကိုကျွန်ုပ်တို့အာမခံနိုင်ပါပြီ။
Arbily X-Buds နားကြပ်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ဇယား
ပုံစံ X-Buds များ
အကွာအဝေးအကွာအဝေး 10 မီတာအထိ
နားကြပ်ဘက်ထရီ 45 mAh ဘက်ထရီ
ဘက်ထရီ Box ကို 500 mAh ဘက်ထရီ
နားကြပ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်4နာရီတိုငျအောငျ
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ Box5အပြည့်အဝတာဝန်ခံသံသရာအထိ
Carga USB အမျိုးအစား C
နားကြပ်အလေးချိန် 4.6 ဂရမ်
အလေးချိန်အပြည့် 141 ဂရမ်
ရှုထောင့် X ကိုက x 12.2 8.1 3.8 စင်တီမီတာ
စြေး 31.99 €ကမ်းလှမ်းချက်ကုဒ်နှင့်အတူ
ဝယ်ယူ link ကို ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။
ပုံစံ နှင့်အတူဟန်းဆက်၏ button ကို format နဲ့ နားကြပ်ဟုလည်းခေါ်ပြီးနားကြပ်များမပါ။ သုံးစွဲသူများကအလွန်အမင်းတောင်းဆိုသည့် AirPods ပုံစံဖြစ်သည်။
El အသံအတိုးအကျယ်အဆင့် အများဆုံးမှာပျမ်းမျှကမ်းလှမ်းချက်များထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်၊
အထိ ၁၈ နာရီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ပလပ်သို့မဟုတ်ကြိုးတွေဘို့မလိုဘဲဂီတ။
နှင့်အတူခံနိုင်ရည်ရှိသည် IPX5 လက်မှတ် ချွေး, ရေသို့မဟုတ် splash ခုခံနှင့်အတူ။
El cable ကိုအားသွင်းနေစဉ် ငါတို့သေတ္တာထဲမှာရှာပါ ရယ်စရာတိုတို။ ချိတ်ဆွဲစရာမလိုဘဲ၎င်းတို့ကို Socket ထဲသို့ထည့်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
သူတို့ရှိသည် အတော်လေးပျက်စီးလွယ်ကြည့်ပါ သူတို့ကျဆုံးမှုကိုမည်သို့ခံရပ်နိုင်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » Arbily X-Buds နားကြပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
Zombie Blast Crew သည်အလွန်မြင့်မားသောအမြင်နှင့်နည်းပညာအရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ခြင်းဖြစ်သည်
Huawei သည် iPad Pro ကိုမကြောက်ပါ။ ၎င်းသည်နောက် Huawei MediaPad M7 ဖြစ်သည်